Maharashtra Tourism: Mission Inotangazve
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Maharashtra Tourism: Mission Inotangazve
India Kupwanya Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
zuva re maharashtra
“Taida kuvaka indasitiri yekugamuchira vaeni seindasitiri yakakosha kuhurumende. Saizvozvo, neindasitiri yechiitiko. Maharashtra haana kana tarenda uye haanawo vateereri, "akadaro Aaditya Thackeray, Gurukota rezveKushanya, Zvakatipoteredza uye Protocol, Hurumende yeMaharashtra, vachitaura ku 'CONGREGATIONS INDIA: Hurumende, Zvematongerwo enyika, Zvemitambo & ZveMitambo Zvezvitendero' zvakarongwa musi wa24 Zvita. 2020.
Kudyidzana kwakaitika manheru eKisimusi 2020, kwakava mashiripiti sezvo Thackeray akapfeka ngowani yaSanta ndokuzvipira kusimudzira uye kukura kwechiitiko uye indasitiri yekugamuchira vaeni panhanho yehondo.
Aaditya Thackery yakaziviswa: Pane yechiitiko indasitiri pamberi, Maharashtra Tourism iri kugadzira bhodhi rezviitiko, hurukuro dzavepo kubvira kutanga 2020.
Gurukota rakaita shanduko yekutsvaira mutemo kune indasitiri yechiitiko yakafanana nezvakaitirwa indasitiri yekugamuchira vaeni. Izvi zvinosanganisira kudzokorodza marezenisi kuti ave nechokwadi chekuita bhizinesi uye Chiitiko Bhodhi yekufambisa zvinokurudzira zviitiko neMice pamwe nekukwezva zviitiko zvepasirese kuMaharashtra.
Vakati, “Pane zvinhu zviviri zvatichange tichiita mumavhiki mashoma anotevera. Chekutanga, tichave tichiumba bhodhi rezviitiko sepuratifomu yekuti munhu wese ave nehukama nehurumende, ataure nzira dzekuenderera mberi uye nemabatiro atingaite kukurudzira indasitiri iyi, tinoivaka sei iyi indasitiri, iyo yakakanganiswa zvakanyanya nedenda. Imwe yacho ndeyekuti, isu tichava nekudyidzana kwepanyama, kuitira kuti isu tinzwe kubva kwauri. Pane kuti ini nditaure, tinoda kunzwa maonero ako pane zvatingaite zvirinani uye zvatingaite nemazvo. ”
Moderator Sabbas Joseph, Co-Muvambi Director, Wizcraft International, akabva angopindura achipa rutsigiro nekutora chikamu kubva kumaindasitiri ezviitiko uye hutungamiriri hweEEMA kubatsira Gurukota kudzora shanduko pakubatana pakati pehurumende nemaindasitiri, izvo Gurukota rakagamuchira.
Vachigovana zvaive zvaitirwa indasitiri yakabatana yekugamuchira vaenzi, Gurukota rakaratidza kuti mumwedzi mitatu yadarika, huwandu hwemarezinesi aidiwa nebazi rekugamuchira vaenzi hwakadzikiswa kubva pa70 kusvika pa10, nhamba yemafomu ekunyorera kubva pa70 kusvika pamasere uye kubva pakuda gumi nemashanu. NOCs, zvivakwa zvitsva izvozvi zvinongoda zvipfumbamwe kuzvisimbisa.
“Takapa chinzvimbo che 'indasitiri' kubazi rekugamuchira vaenzi, iro raimirira kwenguva yakareba - kweanoda kusvika makore makumi matatu. Zera rangu parizvino, ”akadaro achiseka. "Ndinovimba kuti kushanda pamwe chete tinogona kuita shanduko yemitemo yakafanana kune inoitika indasitiri," akadaro.
Unoda kuita dhipatimendi rekushanya kuve chinogonesa
Moderator Joseph akanongedzera kumishumo yekuMaharashtra kuvhura matumba emahombekombe munzvimbo sere, kusimudzira kushanya kwezvekurima, kugadzira nzvimbo dzekudyidzana mukubatana pamwe nekugamuchira vaenzi (pamubhadharo wakareba), ichiita Mumbai 24 × 7, uye kunyange Wankhede Tour.
Vachikurudzira pamusoro peGurukota uye neDhipatimendi rezveKushanya riri pasi pake kukurumidza, Gurukota rakapindura vachiti, "Ndiri kumhanyisa nekuti zuva rega rega rakakosha, hapana zuva rinotambirwa rinouya zvakare. "Kana iwe ukatarisa shanduko yemamiriro ekunze kana kushanya, kuvaka pazuva iro kwakakosha chaizvo."
Achibvunzwa nezve "Divine Maharashtra" chirongwa ne IRCTC, Thackeray akataura kuti kunyangwe nyika yeMaharashtra yaive nemisha yezvitendero zvese zvinokwezva lakhs dzevafambi, vanga vasati vambotariswa zviri pamutemo, kubva pakushanya.
“Kana ndati kushanya kwaMwari, handisi kutaura zvekuvashandisa kana kuwana mari kana mari kubva mazviri. Izvo zvatiri kutarisa zvivakwa zvekuti ivo vasvike nzvimbo idzodzo zvakanaka, kwavari kuti varare usiku munzvimbo iyoyo, kuve nemubhedha wakanaka uye chisvusvuro ipapo, kuti vakwanise kunamatira kumoyo yavo zvizere. Ndinofunga tinofanirwa kutsigira zviridzwa zvetariro, uyu munamato, kunyaradza mufambi ari kufamba netsoka, achifambisa kana kupinda nendege, ”akatsanangura Gurukota uye izvi hazvinei nezvechitendero.
Kunze kwaizvozvo, kuchave nezvivakwa zvekuwedzera uye mabhizinesi anozouya achipoterera nzvimbo dzekunamata idzi dzichiita kuti dzigadzikane, akadaro Thackeray, achinongedzera kuShirdi, iyo ine Maharashtra nhandare yechipiri yakanyanya kubatikana mushure meMumbai.
Achipindura pfungwa yemutungamiriri Joseph mukusimudzira Maharashtra Tourism mushure mekudzikiswa kwebhajeti nekuda kweCovid19, Thackeray akatsanangura kuti kekutanga, bhajeti rezviuru gumi nemazana maviri emadhora rakapihwa chikamu muna Kurume 1,200. Hurumende yakazozivisa 2020 muzana kudzikisira mukusimudzira kunoshandisa kune ese bhodhi nekuda kwedenda.
"Tourism yaifanira kudzikisa mashandisiro, zvakanyanya senge rimwe dhipatimendi kusara kweHutano, Kumba nevamwe vakati," akadaro Thackeray. "Asi Maharashtra Tourism inoita kunge yakafunga zvinhu kana zvasvika pakuzvisimudzira senzvimbo yekuenda."
Sekutaura kwakaita Gurukota, "Tourism iri pamusoro pezvinhu zviviri. Chimwe chinhu chinhu chekuita (chiitiko). Uye imwe yacho inzvimbo yekugamuchira vaeni, ingave iri kumahombekombe egungwa kana nzvimbo yekutandarira. Pakati pavo vaviri ndiyo iyo vibe iyo yatinogadzira. Ndiko kunosimudzirwa. ”
Akawedzera kuti dhipatimendi rekushanya rinofanirwa kugadzira iyo vibe - uye vasiye mabhizinesi kuti vatore nzvimbo kubva ipapo.
“Kupfuura micro-manejimendi, ndinoda kuita kuti bazi iri rive rinogonesa. Haisi yedu basa kuve micromanaging mahotera kana maresitorendi kana kuenda mukugadzira nzvimbo dzevashanyi. Kana iwe ukatarisa kumisika senge UK kana New Zealand kana mamwe akawanda, madhipatimendi ezvekushanya ave akagonesa kune vamwe vagari uye mabhizinesi kuratidza tarenda ravo uye kugona pasirese pasirese. Uye kugamuchira vanhu kubva pasirese kunzvimbo yavo, ”akatsanangura Thackeray.
Bullish pa Tourism Potential: Ini ndaida iyo Tourism nzvimbo
Pakutanga kwechikamu, Gurukota rakaona kuti nepo Maharashtra yakakomborerwa nerunako rwezvisikwa uye kusiyanisa, nzvimbo dzekushanya, nzvimbo dzemapilgrim uye zvimwe zvinokwezva zvekushanya, ivo vaive vasina kupihwa mukana.
"Sei tisati tamboishandisa pakushanya kuhurumende yaive mubvunzo wandaive ndinayo makore ese aya," akadaro.
“Dhipatimendi iri rekushanyirwa raiwanzo kutorwa sedhipatimendi re 'divi'. Chero mukuru kana gurukota raifanira kusendekwa rakapihwa bazi iri. Musiyano uripo, ndakakumbira dhipatimendi iri. Chikonzero chega cheizvi ndechekuti, ndinoona mukana wakakura uyo Maharashtra anayo mukupa mupiro kuhupfumi hwedu, mupiro kumatura edu emari, mupiro mukugadzirwa kwemabasa muhurumende uye kugona kwayinoita kukura mukushanya, "akadaro Thackeray.
“Tourism chimwe chikamu chausingakwanise kutsiva ruzivo rwemunhu nemichina. Ndechimwe chikamu umo Maharashtra neIndia vane mukana wekukura, "akawedzera.
Kuenzanisa Tourism uye Nharaunda, Kugadzira Hupenyu Husingaperi
Kudzokera kumashure kuchikamu chemusoro we "Kuenzanisa Tourism uye Nharaunda Yekusimudzira Kukura: Maha Anogona Kutungamira Nzira pasi peYoung Thackeray?" Joseph akabvunza Gurukota nezve kuenzanisa mapotifoliyo maviri uye maonero ake pakukura kusingaperi.
Nezve chiitiko chake chekumhanyisa maviri portfolio (zvekushanya uye nharaunda), Thackeray akati vanogona kunge vachiuya pamwe chete pane dzimwe nzvimbo, vachimhanya vachiita sevamwe, uye vachipesana pane dzimwe nguva, futi.
“Kukwasva igwavha kwakanakisa chero kupi zvako pasi. Iyo flipside ndeye, ungave uine chikepe chinotyaira kana chikepe chisingadhonze. Tora matumba egungwa, semuenzaniso. Kuratidzwa kwemahombekombe emabhangi kunogara kuchizokura zvakawanda mudunhu senge Maharashtra. Inofananidzwa neGoa, huwandu hwemikana yatiinayo muMaharashtra uye yatiri kugadzira izvozvi ndeyekupenga chaiko. Asi tichiita izvozvi, tinofanirwa kutarisa kugungwa, nzvimbo dzinoitirwa maturu, shiri dzinofamba uye chero paine marara ane simba kana emvura anopinda mugungwa, akarapwa kana kwete, ”akadaro mutauri.
Achipa ngowani yegurukota rezvemamiriro ekunze uye murwiri wezvekushanduka kwemamiriro ekunze, Thackeray akawedzera, “Izvi hazvisi zvekushanya chete. Ini ndinotaura nezve kugadzikana muzvinhu zviviri. Imwe ndeye yakasarudzika modhi yezvakatipoteredza. Chechipiri muenzaniso wakasarudzika wehupfumi. Tinoenzanisa sei zvese zvakakosha. Kuchengetedza kunofanirwa kuve mararamiro. Hatidi kugara ne mask 24/7 kwehupenyu hwedu hwese. Tinoda kufema mweya mutsva. ”
Achibvunzwa nezvekuvhurwa kwemaindasitiri ezvekushanya uye ezviitiko akakanganiswa zvakanyanya nedenda reCovid19 uye kukiya, Gurukota rakasimbisa kukosha kwenzira yekuchenjerera.
“Nyika zhinji dzakavhurika nekuchimbidza uye dzaifanirwa kuvhara zvinhu zvizhinji zvavakavhura. Zvatiri kuyedza kuita ne'Mission Kutanga Zvakare 'yakavhurika munzira inodzedzereka, inononoka uye inononoka, asi kwete kuvhara pane chero chinhu chatakavhura. Nekuti kuvhura nekuvhara zvakare kungave kunokuvadza kune chero indasitiri, ”akadaro Thackeray.
"Ndiri kuda kuti zviitiko zviitike muMaharashtra. Ndinoda mbeva kukura. Ingave mimhanzi makonzati, rarama zviitiko, live theatre, rarama show, kune zvinhu zvakawanda izvo EEMA inogona kuitisa. "Ndiri kuda kuti ive nyika ine simba, ndosaka ndaunza mutemo wekugonesa 24/7," akadaro Gurukota.
“Saka, tichavhura. Chinhu chacho zviitiko zvakaita semakonzati hazvigone kungoitwa nevanhu makumi mashanu chete. Uye vamwe vevatambi - kusanganisira vezvematongerwo enyika, avo vari vatambi - vanofanirwa kutaura pamusoro pemusangano wevhidhiyo kuti vasvike vateereri vakawanda. Asi ndiri kutarisira kuti tinogona kupfuura neizvi munguva pfupi, ”akafungidzira Thackeray.